Ismaaciil Cumar Madaar oo loo diiday inuu u safro dalka Qadar
Rebecca Dykes oo ah Diblomaasi katirsan Safaaradda Ingiriiska ee Beirut oo Meydkeeda la helay, iyadoo la kufsaday Riix Halkan
HARGEYSA, Somalia - Saraakiisha maamulka Somaliland ayaa u diiday Ismaaciil Cumar Madaar, oo dhawaan laga soo saarey Tartankii Qur'aan Akhriska Dubia inuu u safro dalka Qadar, oo uu deganaansho ka helay.
Warsidaha GO ayaa helay Macluumaad la xiriira in Madaxda dowladda Imaaraadka ay ogaadeen in Madaar uu katirsan yahay Kooxda Ikhwaanul Muslimiinka, kadibna ay kasoo saareen Tartanka Qur'anka.
Ciidamada amaanka Somaliland ayaa xiray Madaar isagoo kasoo ambabaxayay magaalada Hargeysa, islamarkaana doonayay inuu maro Muqdishu, si uu Diyaarad uga sii raaco halkaasi wadanka Qadar.
Madaar ayaa lagu hayaa baaritaano, waxaana la waydiinayaa Su'aallo ku saabsan sababta rasmiga ee loogu diiday inuu ka qeybgali Tartanka Qur'aanka, iyo xiriirka kala dhaxeeya Ikhwaanul Muslimiinka.
Madaar ayaa lagu sii daayey Damiin balse lo sheegey in uusan ka bixi karin Somaliland.
Markii uu kusoo laabtey Hargeysa Talaadadii kasoo dhaafay, wuxuu qabtey Madar Shir jaraa'id oo uu ku sheegay in sababta looga soo saarey Tartanka ay tahay diidmada Somalia diiday inay xiriirka u jarto Qadar, balse taasi ay markii dambe been noqotay.
Waxaa beeniyay arinkaasi Hay'adda qabanaysay Tartarnka Qur'aan akhrinta, oo sheegtay in Madaar ay Saraakiisha Imaaraadka ku heleen inuu taageero u muujiyay Baraha Bulshada dowladda Qadar iyo dembiyo kale.
​Madaarka Hargaysa oo laga mamnuucay soo dhaweynta
HARGEYSA- Wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Somaliland, ayaa shaacisay inay gebi ahaanba joojisay soo dhaweynihii sii gelbintii masuuliyiinta xilalka kala duwan haysa ee loogu samayn jirey madaarka caasimadda Hargaysa, isla-markaana wixii haatan ka ...
Puntland: Cabdicasiis Koor oo loo magacaabay Agaasimaha W/Deegaanka 17.12.2017. 20:29
Madaxweynaha FIFA iyo la kulmay boqorka Sacuudiga 17.12.2017. 19:49
Soomaaliya: Xukuumadda oo Dacwad kusoo oogtay Xildhibaano mucaarad ah 17.12.2017. 14:00
Soomaaliya: Wafdi ka socda QM oo soo gaaray Muqdisho 17.12.2017. 13:01
PAKISTAN: 8 ku dhimatay weerar lagu qaada Kaniisad 17.12.2017. 12:22
Real Madrid oo ku guuleysatay Koobka Kooxaha Adduunka 17.12.2017. 11:03